Apple Watch and Action, ny lakilen'ny fahatakarana azy | Vaovao IPhone
Apple Watch and Action, ny lakilen'ny fahatakarana azy
Luis Padilla | | Apple Watch, Fampianarana sy torolàlana
Ny Apple Watch dia mpanjaka tamin'ny fiantsenana Krismasy satria afaka namaky tamin'ny tatitra nataon'ny mpandinika sasany izahay izay manana vola maherin'ny 5 tapitrisa. Ireo maodely vaovao, ny fihenan'ny vidiny raha ampitahaina amin'ny fanombohana ny maodely tany am-boalohany, ny faran'ny famaranana, ny loko ary ny tadiny ... Tsy isalasalana fa io no loharanom-pahalalana ho an'ny smartwatches sy mpampiasa maro izay nampiasa fehin-tànana tsotra manisa ankehitriny. nanapa-kevitra ny hampiasa Apple Watch, izay ankoatry ny zava-drehetra nataon'ilay fehin-tànany dia manome safidy maro hafa. Saingy misy zavatra manafintohina ireo mpampiasa maro ary io no fomba fandrefesan'ny Apple Watch ny hetsika ara-batana ataonao. Azavainay ny lakileny hahazoana izany.
Manomboka amin'ny iray amin'ireo fampandrenesana manelingelina ny maro indrindra izahay: Mijoroa. Tena tolo-kevitra efa efa taona maro izy io ary tohanan'ny fikarohana siantifika marobe. Ny mandeha mandritra ny 5 minitra isan'ora dia mahasalama ary misoroka aretina metabolika toy ny diabeta. Saingy ny olana dia miankina amin'ny fampandrenesan'ny Apple ihany: Tsy ny hijoro fa ny hanao hetsika sasany isan'ora, eny, kely indrindra. Tonga ihany koa ny fampandrenesana alohan'ny faran'ny ora, hahazoana ny hevitr'io ora io. Raha azonao ireo isa 12 amin'ny andro dia nofenoinao ny peratra.
Io angamba no teboka miteraka fisalasalana indrindra. Inona no heverin'i Apple fa fampiharana? Ny orinasa dia mamaritra azy ho toy ny hetsika rehetra izay manisy fihenjanana kely amin'ny vatanao, toy ny dia an-tongotra haingana. Ny Apple Watch dia manara-maso ihany koa ny fihetsikao, ny tahan'ny ainao ary ny Ny hetsika ataonao dia tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny tahan'ny fitempon'ny fonao ho an'i Apple handinika azy io ho fanatanjahan-tena raha tsy izany dia tsy hanisa azy io. Ka ny fanaovana hetsika mitovy amin'izany dia misy olona roa afaka mahazo valiny samihafa amin'ny Apple Watch, arakaraka ny ezaka natao ho an'ny tsirairay.
Farany tonga eo amin'ny peratra izay mahafeno ny kaloria laninay. Tahaka ny teo aloha ihany, ny Apple Watch dia mampiasa ny fihetsiketsehana sy ny tahan'ny fitepon'ny fo hamaritana ny kaloria laninao, fa ny "Calories Mavitrika" ihany. Apple dia miresaka momba ny "Angovo miasa" mba hilazana ireo kaloria miasa izay ireo izay lany rehefa manao hetsika ara-batana isika. Misy ihany koa ny "Basal Calories" na "Angovo miala sasatra" izay nohaninay ho an'ny fiainana tsotra amin'ny alàlan'ny fizotran'ny tena ilaina toy ny fifohana rivotra. Ny kaloria total izay laninay dia vokatry ny fitambaran'ireto roa ireto, fa ny peratra fihetsiketsehana dia manondro ireo mavitrika fotsiny.
Io lasibatra amin'ny hetsika io ihany no azontsika ovaina araka izay tiantsikaNa mandritra ny fanamboarana voalohany ny Apple Watch na amin'ny fotoana rehetra dia ampiasao ny Force Touch avy ao anatin'ny fampiharana aktivitas an'ny fiambenana. Ho fanampin'ny famaritana ny tanjontsika amin'ny kaloria hanjifana (tsarovy fa "miasa" ihany izy ireo) dia afaka mahita famintinana isan-kerinandro ny hetsika ataontsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Apple Watch and Action, ny lakilen'ny fahatakarana azy
Ankehitriny, fa raha te hihazakazaka na mandeha mandritra ny adiny 30 aho fa tsy 1 minitra, ahoana no hanovako izany amin'ny famantaranandro paoma?
Ny iPhone 8 misy efijery OLED mangarahara dia foto-kevitra hafa mahatratra ny tambajotra